Saunada Ofen | BadeBOTTI.CH – asalka Swiss tan 2004
Waayo, qalbiga sauna kasta – heater kaamil ah
Waxaan u isticmaali tayo leh oo kaliya kululeeyayaasha HARVIA ee Finland.
Iyada oo ku xidhan sauna baaxadda aynu hore u qoondeeyey foorno ah oo si mug leh, Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaad dooran kartaa adigoo foornada jecel.
Waxaan kaala talin doona.
Dhamaan Users- iyo xirxiro, eeg DUKUMENTIYADA.
Kariyaha Wood-gubanaya – Layareeyo iyo madax bannaan ..
Elekroofen, fududahay in la isticmaalo oo mar kasta diyaar ..
Foornada Electric la Fernbedieung iyo Programming
Harvia-Topclass Combi , ee shaqada qolka uumiga ama sauna bio
(2,533 Dadka arki this post)
2 thoughts on “Saunada Ofen”
Gerne würde ich meine Sauna zusammenstellen, Nasiib darro Anigu ma heli karo macluumaad qiimo kasta. Waxaad igu soo diri kartaa dalab qaar ka mid ah ama liiska qiimaha? Kharashka Gaadiidka ay ka mid yihiin. Abladen (Access for baabuur la heli karaa, Abladeort 3 milyan neben LKW).
Qolalka uumiga waa la heli karaa saddex qaybood oo kala duwan; Miisaaniyadda (sida guntin), Standard (upgradeable marayo fursadaha) und Elite (mar hore la dhexgeliyey dhammaan fursadaha). Details dazu finden Sie bereits in unserem Online-Shop unter http://www.wellnessfass.ch/shop/f-a-s-s-s-a-u-n-a/index.html .
Intaa waxaa dheer, waxaan idiin dhiibay liiska qiimaha faahfaahsan by email.
Waxaan si farxad leh wuxuu kaala talin doonaa ikhtiyaarada kala duwan. Naga soo wac Tel. 052 347 3727 ama na siiso lambarka telefoonka aad loo yaqaano.